Chineke Ma Gị nke Ọma (Abụ Ọma 139:1)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Moore Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Jehova, i nyochawo m, ị makwaara m.”—ABỤ ỌMA 139:1.
“Anya gị hụrụ m ọbụna mgbe m bụ nwa e bu n’afọ.”—ABỤ ỌMA 139:16
IHE MERE O JI ESIRI ỤFỌDỤ NDỊ IKE IKWETA: Ọtụtụ ndị chere na naanị otú Chineke si were ụmụ mmadụ bụ na ha bụ ndị mmehie, ya bụ, ndị na-adịghị ọcha na ndị ọ na-ekwesịghị ilebara anya. Dị ka ihe atụ, e nwere otu nwaanyị aha ya bụ Kendra. E nwere mgbe obi dara ya mbà, obi ana-amakwa ya ikpe maka na ọ naghị emetacha ihe Chineke chọrọ ka ụmụ mmadụ na-eme. Kendra sịrị na ihe a mere ka ya kwụsị ikpe ekpere.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZIRI ANYỊ: Ihe Jehova na-ahụ abụghị naanị na i zughị okè, ọ na-enyochakwa obi gị, ghọta ụdị mmadụ ị bụ. Baịbụl sịrị: “Ya onwe ya maara nnọọ otú e si kpụọ anyị, ọ na-echeta na anyị bụ ájá.” Ihe ọzọ bụ na “ọ dịghị emeso anyị dị ka mmehie anyị si dị.” Ọ bụrụ na anyị echegharịa, ọ na-emere anyị ebere ma gbaghara anyị.—Abụ Ọma 103:10, 14.
Ka anyị lebagodị anya n’ihe Baịbụl kwuru gbasara eze Izrel aha ya bụ Devid, bụ́ onye anyị kwuru okwu ya n’isiokwu mbụ gbara n’Ụlọ Nche a. Devid kpegaara Chineke ekpere, sị: “Anya gị hụrụ m ọbụna mgbe m bụ nwa e bu n’afọ, e dekwara akụkụ ahụ́ m niile n’akwụkwọ gị . . . Chineke, biko, nyochaa m, marakwa obi m.” (Abụ Ọma 139:16, 23) N’eziokwu, Devid maara na n’agbanyeghị na o nwere oge ndị ya mere mmehie dị oké njọ, Jehova ga-achọpụtali na ya ji obi ya niile chegharịa.
Jehova ma gị nke ọma karịa otú mmadụ ọ bụla maara gị. Baịbụl sịrị: “Mmadụ na-ahụ ihe anya na-ahụ; ma Jehova na-ahụ ihe dị n’obi.” (1 Samuel 16:7) Chineke ma ihe ndị mere i ji akpa àgwà otú i si akpa. Ihe ndị ahụ bụ: ihe ị ṅụtara n’ara, otú e si zụọ gị, ebe ị nọ too, na ụdị mmadụ ị bụ. Chineke na-ahụkwa ụdị mmadụ ị na-agbalị ka ị bụrụ. O jighị mgbalị a ị na-eme egwu egwu n’agbanyeghị na ị na-emejọ ihe mgbe ụfọdụ.
Ma, oleezi otú Chineke si eji ihe niile a ọ ma banyere gị akasi gị obi?